1. အိမ်ထောင်ရှိသည် ကလေးကမွေးပြီး၁၅ရက်ရှိပါပြီ။ ချက်မကြွေသေးဘူးဆရာရှင့်။ စိုးရိမ်ရပါသလားရှင့်။ ဒီထက်ထူးခြားမှု မရှိရင် စိတ်မပူရပါဘူး… ချက်ကြိုးအကြောင်းကိုအောက်က Link မှာရှိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးမှာဖတ်ကြည့်ပေးပါ… http://babimildmomsclub.com.mm/?p=5971 ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild ——————————-...
မေး။ ။ ကလေးနို့မဝတဲ့အခါ နို့ဘူးတိုက်လို့ ရပါသလား။ ဖြေ။ ။ မိခင်နို့ကိုခဏခဏပေးစို့လျှင် နို့ထွက်များလာပြီးကလေးနို့ဝလာမှာပါ။ ကလေးကို နို့မတိုက်ခင် မိခင်ကအရည်များများသောက်ပါ။ နို့၊ ကော်ဖီတို့ သောက်လို့ရပါတယ်။ မိခင်နို့သာကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးမို့ မိခင်နို့သာတိုက်ပါ။ ကလေးနို့စို့ပြီးရင်...
1. Angel Queen ဆရာရှင့်သားကြီးက၉လကျော်ပါပြီ။ နေ့လည်ခင်းတွေအစာပြေဘာမုန့်တွေကျွေးလို့ရသေးလဲ။ ရှင့်ကြက်သားဘီစကစ်နဲ့အနှစ်မပါတဲ့ပါမု့န့်တွေကျွေးလို့မရတော့လို့ပါရှင့်။ ဒီအရွယ်မှာ ဘာကျွေးရမယ်၊ ဘာမကျွေးရဘူးလို့ အထူးတလည် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါဘူး… အာဟာရ မျှတအောင် ကျွေးပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်… နောက်ပြီး ကလေးကို...